सर्लाहीमा शीतलहरको मार, कहाँ छ सरकार ? - योहोखबर
सर्लाहीमा शीतलहरको मार, कहाँ छ सरकार ?
काठमाडौँ - अचानक बढेकोचिसोले तराई–मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । तीन–चार दिनदेखि मौसममा एक्कासी परिर्वतन आएर चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो । चिसो हावा र बाक्लो हुस्सुले दैनिक ज्यालादारी गर्ने देखि बालबालिका , जेष्ठ नागरिक र बिरामीहरुलाई अत्यधिक समस्या भएको छ ।
शीतलहरका कारण केही दिनयता तराई–मधेशको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसको चहलपहल घट्न थालेको छ । सर्लाहीको मलंगवामा सर्वसाधारण चिसो छल्न चोक चोकमा आगो बालेर बसेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सहायक सडकमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेपछि सडकमा हिँड्न र सवारी चलाउन समस्या हुन थालेको छ । यहाँका ग्रामीण तथा दलित बस्तीमा चिसोको प्रभाव बढी देखिएको छ । सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ ।
शीतलहरले प्रभावित भएकाका लागि हालसम्म स्थानीय तह वा विपद् व्यवस्थापन समितिले कुनै विशेष प्रबन्ध गरेको छैन । अघिल्ला वर्षहरुमा स्थानीय तहले सार्वजनिक ठाउँमा आगो ताप्नका लागि दाउरा वितरण गर्दै आए पनि यो ध्यान नदिएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।
मलंगवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति सबनम मिकरानी भने विपन्न परिवारलाई चिसो बाट जोगाउन नगरपालिकाले व्यवस्थ ागर्ने बताउँछिन् । जिल्ला बन कार्यालय सँग समन्वय सार्वजनिक स्थलमादाउरा राखेर आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय बासिन्दा भने शीतलहरका कारण वर्षेनि धेरै मानिसले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाउँछन् । देशमा तीन तहका सरकार हुँदा पनि आफूहरू चिसोकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने नियति भोगिरहनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।